Victorian Baker's Cabinet ပေါ်တွင်သူ၏လက်ကိုဆွဲနိုင်သလား။ အ | အဖတ်ဆယ်မုဆိုးများ | စီးပွားရေးပုံပြင်များ
ခမ်းနားထည်ဝါသောအိမ်တစ်လုံး၏အဆောက်အ ဦး များသည်အစုတ်အပြဲမရှိ၊ စတော့ရှယ်ယာအပြည့်ရှိသည်။ Drew သည်လက်လှမ်းမမီသောစျေး ၀ ယ်ထားသော Victorian မုန့်တိုက်၏ ၀ န်ထမ်းအတွက်ဖြစ်သည်။ Junk ဆိုင်ပိုင်ရှင်တစ် ဦး သည်အရောင်းပိတ်ခြင်းကိုပြုလုပ်လျက်ရှိပြီး chaps များသည်ခေါင်းရင်းဘက်သို့ ဦး တည်နေသည်။ ခမ်းနားသောအိမ်ပြန်ပြင်ဆင်ရေးကျောင်းသို့ ဦး လှည့်စဉ်ကျောင်းအုပ်ဆရာမကြီးနှင့် Drew haggles
ဗြိတိန်၏အကြီးဆုံးအလှဆင်ဆယ်ယူရေးခြံများထဲမှပိုင်ရှင်ဖြစ်သူ Drew Pritchard သည်သူ၏စတော့များကိုပြန်လည်ဖြည့်တင်းရန်ပစ္စည်းအသစ်များကိုအမြဲတစေရှာဖွေနေသည်။ ဤစီးရီးသည် Drew နောက်သို့ လိုက်၍ ကမ္ဘာ့အနှံ့အပြားရှိသမိုင်းဟောင်းများနှင့်ပျောက်ဆုံးသွားသောအပိုင်းအစများကိုရှာဖွေရင်း၊ အချို့သောကြွယ်ဝသောမြေများအပါအ ၀ င်။ ဒါပေမယ့်သူတို့ကိုနေရာချထားတာဟာတိုက်ပွဲတစ်ဝက်သာဖြစ်တယ်။ Drew သည်အရာဝတ္ထုတစ်ခုစီ၏ပိုင်ရှင်အားသူ့အားစျေးနှုန်းကောင်းကောင်းဖြင့်ရောင်းရန်ဖြားယောင်းရမည်၊ ထို့နောက်၎င်းသည်၎င်း၏အကျိုးအမြတ်ကိုမရောင်းမီအမှိုက်ပုံသို့ပြန်သွားသည်။
Salvage Hunters S2E8 မှ
စီးပွားရေးပုံပြင်များသို့စာရင်းသွင်းပါ။ အရာအားလုံးရောင်းဝယ်မှု၏အိမ်ဖြစ်သည်။ ကြီးမားသောလုပ်ငန်းမှသည်မကောင်းသောသူဌေးများအထိ၊ စီးပွားရေးပုံပြင်များသည်သင်နှစ်သက်ရန်အရည်အသွေးမြင့်လုပ်ငန်းနှင့်ပတ်သက်သောအကြောင်းအရာများကိုပံ့ပိုးပေးသည်။
မည်သည့်မေးမြန်းချက်၊ ကျေးဇူးပြု၍ ကျွန်ုပ်တို့ကိုဆက်သွယ်ပါ။
Restoring 19th Century Wine Cooler | Salvage Hunters | Business Stories
Inside Norwegian Salvage Yard | Salvage Hunters | Business Stories
Drew Finds Hidden Treasures In Lemmington Hall | Salvage Hunters | Business Stories
Off Limit Items Inside The 1920s Themed Hotel | Salvage Hunters | Business Stories
Restoring Vintage Industry Lamps | Salvage Hunters | Business Stories
Restoring Engineer's Cupboard From Victorian Time | Salvage Hunters | Business Stories
One Of A Kind In UK: Restoring British Building Details | Salvage Hunters | Business Stories
Drew Restores Early 19th Century Lanterns | Salvage Hunters | Business Stories
Drew Finds Amazing Items In Country House | Salvage Hunters | Business Stories
Haunted House Haul | Salvage Hunters | Business Stories
Drew Finds Hidden Treasures At St. Mary's School | Salvage Hunters | Business Stories
Drew Finds Hidden Treasure In Old Norfolk Boatyard | Salvage Hunters | Business Stories
Hidden Gems Inside The Gothic Castle In Ireland | Salvage Hunters | Business Stories
Vintage Norwegian Search Light From WW1 | Salvage Hunters | Business Stories
Can Drew Restore the Opaline Lights? | Salvage Hunters | Business Stories
🔎 UK famous historical landmarks Episode 55 📚 Salvage Hunters ❤ Gloucestershire
Amazing Find! | Siebe Gorman Diving Helmet | Salvage Hunters | Business Stories
19th Century Balcony Rails Restored To Former Glory | Salvage Hunters | Business Stories
1950’s CPR Mannequin + Other Vintage Items | Salvage Hunters | Business Stories
A vintage Bugatti - Holland 📚 Salvage Hunters